SAWIRRO: Gudoomiye Mursal, Jawaari iyo Madoobe oo go’aano kasoo saaray doorashada iyo Xaalada K/Galbeed | KALSHAALE
SAWIRRO: Gudoomiye Mursal, Jawaari iyo Madoobe oo go’aano kasoo saaray doorashada iyo Xaalada K/Galbeed
Dec 6, 2018 - 7 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Waxaa Magaalada Muqdisho kullan xasaasi ah ku yeeshay gudoomiyayaashii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Gudoomiyaha haatan ee golaha Shacabka, waxa ayna kullankooda kaga doodeyn doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ciidanka Xamar laga rarey in ay tahay Khalad.
Guulaysta reer baydhabo sida reer kismayo dad
Adag noqda oo roobow doorta axmed cade iyo
Robow isku tariikh bey ahayeen xasan dahir haduu
Tol lahaan lahaa banadir buu madaxwayne ka
Noqon lahaa lakiin xabsi ayaa lagu ilaaway
Axmed Daahir waa Habar-Gidir, haddii Kursiga loo dhiibo yaa dalka Difaacaa.
Duqii Hiraab ayaa ugu duceeyey dagaal joogtaa, Mudulkana waxaa loogu duceeyey Weel buuxo oon baroobin.
= Xassan Daahir
Rasalwasaare Kheyre ayey u taal asagaa Mursal kursiga saarey without election.
Labada qodob ee kale waa sax, laakiin Kismaayo, Dhuusa-mareeb iyo Baydhabo, Jowhar, ma diidikaraan Ciidamada laga keeno Xamar, maadaama ay ka midyahiin Maamulka Banaadir State.
Rag adag noqda kkk
Maxaad rag adag u noqonwaydeen markii uu Gabre farta idiinku yeedhayay ee aad u dhibayseen dad ka badan 1000 qof oo ka soo jeeda Beesha Ogaadeen?
Somaliya waa meel dhaqanka Inangumeedka u taqaana Geesimo.Madaxwaynaha wadankaaga diid taladiisa,ka soo horjeejo,marka uu nin shisheeye yimaadna kabaha u qaad.Kaasi waa dhaqanka lagaga dhaqmo Somaliya.
Waa waxa ilaa maanta 30 sano loo waayay dad Somaliyeed oo wada shaqaynaya.
Ninkan Mursal shaqadiisu waa Gudoomnka Golaha shacabka.Wax shaqo ah kuma laha Ceedanka geeeyay Baydhabo.Arintaasi waxaa Ciidanka waxaa u xilsaaran dawlada.
Hala joojiyo dhaqankan uqdada iyo qabyaalada ku dhisan ee Somaliya hadheeyay.
U daaya Madaxwaynaha shaqadiisa oo shaqadiina qabsada.
Tuugii Shariif Sakiin ayaa meel la saaray oo Tuug kale ayaa iskeenaya.
Roobow waa dhagar Qabe u baahan in maxkabad la saaro oo Bulshada laga qabto.
Dumarkii Gabre waa in laga siheeya Somaliya.
Inan gumednimada iska dhaaf somaliya waxay wax
Ku qayb sata qabiil ragii argagisada ahaa hadii qar
Madax noqdeen qaarna xabsi lagu ilowbey manaa
Kenay sudanta adiga adeerka wasiirka maliyada
Laga dhigay xolihii umadana wuu dhacay fidnadii
Uu aburay weli way socotaa barlamankii bu madaxa
Madaxwaynaha somaliya D kan jubaland D kan
Puntland D kan somali galbeed D manaa sudanta
Marmarbaad iska dhigtaa sida Land Of Punt .. isaga ayaa soo tiriya Tulooyin la haysto iyo meel cidla ah.
Nfd,Kililka 5naad, Bayland,Jubada sare.waxaa ayuu shubaa.
Haatan waxaad soo tirisaa – dee Ina Ilay,Axmed Madoobe,laakin anuu waxaan ku leehay – isku wada daroo Somali oo dhan ayaa Zero taagan.
Mida Mr Bayle,Wasiirka Maaliyadu lacagtaasi kuma maqna.
Warka oo dhan waxaa weeyi in uu meeshaasi ka shaqaystay Xasan sheekh Maxamuud iyo waliba shaki laga qabo Jabuuti.Aduu waxbaa is-barkan.
Mr Bayle waa Oday ah Reer Wali Asumaal Dynasty.Farmaajo waa Xalaal cun oo waa Misgiin.
Khayre waa maal qabeen wayn oo uma baah lacag uu ka dhaco dawladiisa.
Anyway,mhore haloo socdo.